China RCL-2118 Back-nitaingina LED Linear Light orinasa sy mpanamboatra | lafo vidy
Ny jiro-clip karazana jiro LED haingam-pandeha, vatana jiro aliminioma, fitarihana hafanana mahery vaika
ary tsy misy fiovana, manatsara ny fiainan'ny maody mazika LED.
Karatra lohataona Fametrahana Orifice, misy jiro, ny lafiny telo ambony sy ambany dia hazavana
ampiasaina hampidirana ny faran'ny lamina 21mm laminate, ny halaliny dia mifandray amin'ny halalin'ny 13mm
Ampiasaina eo anelanelan'ny kabine, soloina ny tsanganana romana.
Tandremo ny banga misy eo amin'ny takelaka am-baravarana amin'ny lafiny roa
Afaka mametraka ao an-dakozia Kitchen, lalimoara, Kabinetra fidiovana sy kabinetra hafa izay mila hazavana eo anelanelan'ny kabine.
Karatra lohataona Fametrahana Orifice
Ny tombony azo amin'ny jiro linear LED
1, fitsitsiana angovo avo
Ny angovo mitsitsy angovo dia sariaka amin'ny tontolo iainana tsy misy fandotoana. DC drive, fihenan'ny herinaratra elektrika-optika faran'izay kely ambany manakaiky ny 100%, ny vokatr'io hazavana io dia mihoatra ny 80% fitsitsiana angovo noho ny loharanom-pahazavana nentim-paharazana.
2, fiainana lava
Ny loharano maivana LED dia antsoina hoe hazavàna lava, izay midika hoe jiro tsy maty mihitsy. Loharano hazavana mangatsiaka, encapsulation resin epoxy, tsy misy faritra malalaka ao amin'ny vatana maivana, tsy misy lesoka ny hazavana filamenta, mora may, mandoto termaly, simba ny jiro sns ... ary ny androm-piainana dia mety hahatratra 60000 ka hatramin'ny 100,000 ora. , izay avo 10 heny noho ny an'ny hazavana nentim-paharazana. ny etsy ambony.
F: Afaka misafidy jiro jiro ve isika?
Valiny: Eny, afaka misafidy jiro tsipika habe mifanaraka amin'ny filanao izahay. Azafady mba lazao anay izay ilainao.
F: Manome antoka momba ireo vokatra ve ianao?
A: Eny, manome garantia 3 taona. Raha manana fanontaniana ianao dia mifandraisa amin'ny mpivarotra azafady
F: Momba ny ora fanaterana?
Matetika, ny ora fanaterana dia 10-15 andro fiasana. Araka ny filanao, raha mila manamboatra fantsona alimina alimina vaovao isika dia mila fotoana bebe kokoa
Teo aloha: Vidiny ambongadiny China Square Led Aluminium Profile - RCL-2518 Fitaovana tariby LED eo alohan-jiro - lafo vidy
Manaraka: RCL-2420 hazavana LED hazavana miverina
RCL-2520 hazavana LED tariby miverina miverina
RCL-3620 Back-nitazona LED Linear Light
RCL-2420 hazavana LED hazavana miverina
RCL-2720 hazavana LED tariby miverina miverina
RCL-2616 hazavana LED tariby tafaverina miverina